बिचार / ब्लग Archives - नेपाल आज
बिचार / ब्लग	बिचार / ब्लग
भुकम्प आएको आयै छ । म नडाराइ हिडेको हिडै छु । कहाँ जानु पर्छ र कहाँ जाँदै छु, त्यो केवल मलाइ मात्रै थाहा थियो । जहाँ जाँदै छु त्यो विस्तृत जानकारी दिने हो । मलाइ मेरो जीवन के होला कुनै डर थिएन । मलाई भगवानले सजिलै मर्न दिनु हुन्न भन्ने भरोशा थियो । सुरुमा कलाकार […]
Posted on: April 12, 2017April 13, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
–हरिराम रिमाल केहिदिन अघिको कक्षामा हाम्रा राजनीतिक गुरु रमेश सुनुवारले बेलायती शास्त्रीय अर्थशास्त्रको छलफल चलिरहदा दार्शनिक तथा अर्थशास्त्री जोन स्टुअट मिल ले सन १८६५ देखि सन १८६८ सम्म बेलायती संसदमा रहदा महिलाहरुले पनि मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने आवाज उठाउदा सम्पुर्ण बेलायती सांसदहरु मुर्छा परेर हाँसेका थिए र आज त्यही बेलायती संसदमा कसैले महिलाको मतदान अधिकार खोसिनु […]
Posted on: April 3, 2017April 4, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी बाबुराम भट्टराईको राजनीति भनेको देश सिध्याउने खेल हो । पतिले चलाएको खेलमा पत्नीको भूमिका हुनु कुन ठूलो कुरा भयो र ! अहिलको गतिविधि भनेको नेपाली जनतालाई दुःख दिएर, तड्पाएर देश सक्नकै लागि हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी एअर मार्सल राख्न दिनु पर्छ भनेर प्रस्ताव लैजाने पहिलो व्यक्ति हिसिला यमी हुन् । […]
Posted on: March 20, 2017Posted by: Bishow Rimal
सरला रेग्मी घर दुबै घर नै हुन् । एउटा जन्म घर, एउटा कर्म घर । आफ्नो वालापन विताएको घरको माया र आफ्नो आधा भन्दा धेरै जीवन विताउने घरको माया अनि घर भित्र बस्नेको माया बराबर नै हुनुपर्ने हो । बराबर होस् भनेरै होला ससुरालाई बुबा, सासुलाई आमा, जेठानी अनि आमाजुलाई दिदि, देउरानी अनि नन्दलाई बहिनी, […]
Posted on: March 14, 2017March 16, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
डा. राजेश अहिराज सप्तरीमा प्रहरीसँगको झडपमा पाँच जनाले ज्यान गुमाए । ज्यान गुमाउनेहरु कसका कार्यकर्ता हुन् केही थाहा छैन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले एमालेको मेची महाकाली अभियानमा आफूहरुको निषेध छैन तर जनताले प्रतिकार गर्न सक्छन् भनेको थियो । तर जब पाँच जना मारिए, तब मोर्चाका नेताहरु झन्डा ओढाउन पुगि हाले । उनीहरुको लाश बोकेर […]
सप्तरी घटनाबारे रवीन्द्र मिश्र भन्छन्, ‘मर्माहत नहुने नेपाली को होला ?’
रवीन्द्र मिश्र फागुन – २४ । सप्तरीमा भएको घटानाबाट मर्माहत नहुने नेपाली को होला? झन मधेशीहरूको त आँगनमैं यस्ता घटनाहरु दोहोरीरहेका छन्। मृत्तकहरूको आत्मालाई चिरशान्ति र परिवारका सदस्यलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस्। घाइतेहरुको छिटो स्वास्थ्यलाभ होस्! तुरून्त घटनाको छानविन होस् र दोषीमाथि कारवाही होस्। हरेक नेपालीको आत्मसम्मान, समानता र समृद्धिको चाहानाप्रति संवेदशिल हुनु सबैको […]
पहाडबाट कार्यकर्ता ओसारेर मधेसमा ताण्डव गरे ओलीले
Posted on: March 7, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
बिनोज शर्मा एक दशक लामो माओवादी जनयुद्धको अन्त्यपछि पहिलो संविधानसभाको चुनावमा विश्लेषकहरुले माओवादीले १०–१५ सिटमात्रै जित्ने विश्लेषण गरेका थिए । त्यसको ठीक विपरीत तत्कालीन नेकपा माओवादीले पुराना पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो अन्तरले पछाडि पार्यो । त्यसैगरी दोस्रो संविधान सभाको चुनवामा धेरैले माओवादीले चुनाव जित्ने आँकलन गरेका थिए । त्यसको ठीक विपरीत माओवाद […]
Posted on: March 4, 2017March 5, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
–सम्झना शाक्य (मां प्रेम प्रार्थना) प्रेम र यौनलाई नेपाली समाजमा बर्जित बिषयको रुपमा लिईन्छ । तर माया त माया हो । समाजले, धर्मले जति बर्जित गरे पनि आखिर मानिसहरु मायाको लागि भौतारिएकै छन् । लूकेर चोरेर भए पनि माया पिरती लगाएकै छन् । त्यसैले यो रोकेर रोकिने कुरा होइन बरु खुलस्त छलफल गरेर कसरी प्रेममय […]
हाम्रो होइन राम्रो नेता छानौ, भ्रष्टलाई बहिष्कार गरौं
कुनै पनि नेता तथा ब्यक्ति सफल, असफल, सदाचारी एवम भ्रष्टाचारी हुनुको पछाडी मुलभुत रुपमा पार्टीको नीति, मूल्य मान्यता एंव जन्मजात प्रेरणाको आधारबाट लगाउन सकिदैन अपितु उ जन्मेको घर परिवार एवं समाजबाट बनेका धारणा, विस्वास गर्ने शैली आदी पनि जिम्मेवार हुन्छ्न । यसरी पारिवारिक एंव सामाजिक सस्कार र सभ्यताले उसलाइ आन्तरिक रुपमा निर्माण गरिरहेको हुन्छ । […]
‘एक पार्टी कम्युनिष्ट राज्य सत्ता’ भएको भियतनामले पुँजीवाद र खुला आर्थिक नीतिबाट यसरी फाइदा लिँदै छ
डा अंगराज तिमिल्सिना पोहोर साल डा स्वर्णीम वाग्लेले भियतनामको आर्थिक प्रगतिका बारे “ससुराली आउन पनि अब त लाज लाग्ने भो” भन्ने घत लाग्दो फेसबूक पोष्ट लेख्नु भएको थियो । गत हप्ता त्यही भियतनाम कामकै सिलसिलामा फेरि देख्ने मौका मिल्यो । वास्तवमै कम्युनिष्ठ भियतनामको उदारवादी अर्थतन्त्र अहिले विश्वमा आँट्यो भने विकास त हुँदो रै’छ त भन्ने गजबको […]
तिमी सेक्स माग्थ्यौं, म राता ओठले चुम्बन गर्थेँ
Posted on: February 14, 2017March 11, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
–मञ्जु मिश्र प्रिय भ्यालू (भ्यालेन्टाइन) मुटु भरीको माया अनि धेरै धेरै शुभकामना प्रणय दिवसको । आज त भ्यालेन्टाईन डे, तिमीलाई सम्झने दिन, तिमीलाई मन पर्ने उपहार पठाउने दिन । के पठाउँं तिमीलाई ? आफैले गोडीमेली गरी कति जतन गरी फूलाएको यो रातो गुलाव, थाहा छ बिहानदेखि यसलाई एक टक हेरिरहेँ तिम्रो हातमा कति सुहाउला भनेर […]
नेपाल, भारत र चीन टुक्राउने योजनामा जर्ज सोरस र फादर मुन (भिडियोसहित)
Posted on: February 11, 2017April 6, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
माघ २९ । नेपालको राजनीतिलाई प्रभावमा लिएर चीनलाई पाँच टुक्रा पार्ने र भारतलाई पनि बाँकी नराख्ने उद्देश्य बोकेको एक अमेरिकी संस्थाले नेपालका मिडियामा पनि लगानी गरिरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुशार अमेरिकाको ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको एक रिपोर्टमा यस्तो उल्लेख छ । यो त्यही फाउन्डेसन जसबाट नेपालका केही मिडियाले पनि पैसा लिन्छन् । यसरी […]
Posted on: February 9, 2017February 9, 2017Posted by: Tirtha Khanal
भानुभक्त आचार्य माघको दोस्रो हप्ता बोसोयुक्त साबुनविरुद्ध शृंखलाबद्ध विज्ञापनहरुले काठमाडौंबाट प्रकाशित केही अखबारहरु भरिए । मूल पृष्ठ र त्यसको भित्री पृष्ठमा समेत पूरै विज्ञापन थियो, जसले खोल नभएका सबै साबुनहरुमा बोसो प्रयोग हुन्छ भन्ने भ्रामक सन्देश दिएको थियो। विज्ञापनको शृंखला हप्ताभरि चल्यो । पत्रकारहरुका लागि यो ‘कागलाई बेल पाक्नु’ जस्तो भए पनि प्रकाशकहरुले लाखौं आम्दानी […]
यो कुन युगको शिक्षा हो ? सरकार ! हामीलाई कानुन भएको अनुभूति होस्
Posted on: February 8, 2017February 9, 2017Posted by: netra
मीरा प्रसार्इं राजधानीको धुम्बाराहीस्थित लुम्बिनी बिगनर्स एकाडेमीको कक्षा नाैमा अध्ययनरत छात्र सुदीप दाहाललाइ प्रधानाध्यापक सुरेश यादवले धेरै शिक्षकलाइ अनावश्यक प्रश्न सोधेर हैरान पारेको आरोपमा चरम यातना दिएको समाचार आयो । निलडाम रहने गरि कुट्दा पनि कथित प्रधानाध्यापक यादव ‘आफुले अक्षम्य गल्ती गरेको छैन’ भन्दै छन भनेको समाचार पढेर पो झनै अचम्म लागिरहेकाे छ । छात्र […]
दाइजोको पिरले बालिकाहरु भ्रुणमै मारिन्छन्
Posted on: January 31, 2017February 2, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
— डा. सि.के सिंह विवाहको समयमा बेहुली तर्फबाट बेहुला वा बेहुलाका परिवारलाई दिने नगद तथा जिन्सी सरसामानलाई नै दाइजो भनिन्छ । यसलाई तराई तथा मधेसतिर दहेज पनि भनिन्छ । सामान्यतः दैनिक जीवनमा चाहिने घरेलु सामानहरु जस्तै फर्निचर, लत्ताकपडाका सामाग्रीहरु दाइजो दिइन्छ । सुनचाँदी हिरामोतीका महंगा गरगहनाहरु पनि दाइजोमा पर्छन् । समयक्रमसँगै आधुनिक सुविधाका सामाग्रीहरु जस्तै […]
अपराधीका नाइकेमा देव गुरुङसहित चार जना ‘कमरेडहरू’ लाई अलिकति पनि लाज छैन ?
Posted on: January 23, 2017January 24, 2017Posted by: Tirtha Khanal
डा. ऋषिराज बराल संविधानको अन्तर्वस्तुका सम्बन्धमा बहस र विवाद गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन, यो संविधान जनसंविधान होइन । नेपाली समाजमा विद्यमान उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन शक्तिबीचको अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने प्रावधानहरू यसमा छैनन् । संविधानका सन्दर्भमा जुन विषयलाई लिएर विमति जनाउनु पर्ने थियो, त्यो विषय उठेन । उठ्नेबित्तिकै नयाँपुराना ठालुहरूलाई मार परथ्यो, डलर र भारुमा रमाएर […]
देश टुक्रिने बलियो आधार तयार नहुञ्जेल महन्थ ठाकुर सहमतिमा आउँदैनन्
Posted on: January 22, 2017January 24, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
–किशोरकुमार विश्वास प्रमुख तीन दलहरुको मेल हुने सम्भावना अझै देख्दिनँ । यदि तीन दल मिलेर मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर चुनाव तिर लैजान खोजे भने अनर्थ हुन्छ । अनर्थ यसअर्थमा हुन्छ कि तीन दलले जति सुकै जे सुकै गरुन् मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउँदै आउँदैन । अहिले मोर्चाले भनेको सिमांकन, संशाधन जस्ता विषय बेकारका बहाना मात्रै हुन् […]
कसरी भयो एमालेको राष्ट्रवाद ‘अन्धराष्ट्रवाद’ ?
Posted on: January 19, 2017January 22, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
-किरण पौडेल कुनै बेला माओवादीका कार्यकर्ताहरु पनि सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको चर्को आलोचना गर्थे । भारतीय व्यक्ति–२०२७ सालमा आफूले नागरिकता लिएको त्यसपछि बाबुको नागरिकता बनाइदिएको भन्ने विषय महतोसँग सधै जोडिन्छ । महतोको आलोचनाका लागि उपेन्द्र यादवका कार्यकर्ता नै तम्सिन्छन् भने माओवादी कार्यकर्ता के कम ? माओवादी कार्यकर्ताको आँखा महतोको मामिलामा उघ्रिन्छ । तर आफ्नै […]
पोषण सुधारका लागि सबैको प्रयास अपरिहार्य
सामान्यतया एउटा बच्चा गर्भमा आएदेखि सो बच्चा जन्मेर दुई वर्षको पुग्दासम्म दिन गन्ती गर्ने हो भने कुल १००० दिन पुग्छ । यस समयावधिलाई हामी सुनौला हजार दिनभनि बुझदछौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यस समयभित्र बच्चाको ८० प्रतिशत शारीरिक र मानसिक वृद्वि र बिकास भैसकेको हुन्छ । नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०११ का अनुसार […]
Posted on: January 9, 2017January 12, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
–अस्मिता भण्डारी हिजोआज दिग्गज अर्थविद्, योजनाविद्हरुले खेतियोग्य जमिन मासेर प्लटिङ भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । राम्रो खेति नहुने जमिनमा बस्ती बसाउने र खेतियोग्य जमिनमा फसल लगाउन हामीले सकेनौं । सकेका छैनौं । सकेको भए सुडान र सोमालीयामा जस्ता कुपोषित बालबालिका हाम्रै बझाङ र बाजुरामा देख्नु पर्ने थिए । यो प्रशंगलाई सोझै २५० वर्षभन्दा अगाडिका […]
जन्मिनु त नाफाको सुक्रकीट भएर जहाँ कामकाज केही नहोस केवल क्यालकुलेटरमा ब्याज थुप्रिरहोस्
Posted on: January 1, 2017January 2, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
भौतिक मल्ल कुनै युद्धमा सहभागी भएर फर्केको सिपाही जस्तै जुत्ता नखोलेर विस्तरामा लम्पसार परिरहेको थिएँ । छोरो नजिकै बसेर मोटु पत्लु कार्टुन हेरिरहेको थियो । त्यतिबेलै लाइन गयो । उसको बिकल्प म भएको ठाउँमा आउनु बाहेक अरु रहेन । छेउमा आएर बस्यो र, मोबाइल माग्यो । मैले दिइनँ । अनि सोध्न थाल्यो “बाबा तपाई काठमाण्डौ […]
समृद्धी क्रान्ति चौँथो भागः सामाजिक न्यायबाट चुक्दा देशमा अस्थिरता [भिडियो]
Posted on: December 24, 2016April 6, 2017Posted by: netra
पुस – ७ । सामाजिक तथा राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीको समृद्धी क्रान्तिको चौँथो भाग लिएर आफ्नो युट्यब ब्लग मार्फत आएका छन् । नेपालको वर्तमान शैक्षिक र जनस्वास्थ्यका विषयमा उनले युट्यब ब्लगमार्फत जनचेतना जगाउने प्रयास थालेका हुन् । उनका अनुसार सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धी क्रान्ति र समृद्धी राष्टको पूर्वसर्त हो । यसमा हामी चुकेका कारण नेपाल […]
दबाब नदिने हो भने यो सरकारले नेपाली सेनालाई भारतको झन्डामुनि पुर्‍याउँछ
–डा. उमेश भट्टराई, पूर्वरथी नेपाली सेना भारतले जब जब नेपालको राजनीतिक धुमिल भएको हुन्छ, जब नेपालको शासन सत्तामा कमजोर शासकहरु बसेका हुन्छन्, जुन बेला उसको प्रभाव नेपालमा बढी जमेको हुन्छ, त्यो बेला नेपालको सार्वभौमसत्ता नै समाप्त पार्ने योजनासहित भारत अगाडि आउँछ । अहिले जुन नेपाली सेनालाई भारतले ‘सब–रिजनल’ सेनाको रुपमा भारतको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र संघमा […]
भाषण गर्दा क्रान्तिकारीः निर्णय लिने बेलामा पश्चगामी
Posted on: December 21, 2016December 21, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
–निर्मल भट्टराई नेपाली नेताको एउटा नराम्रो बानी छ । भाषण गर्ने मञ्च भेटेपछि बोली कडा नभई नहुने । जनताको तालीको लोभले उनीहरुको बोलीमा एक्कासी क्रान्तिकारी लवज देखिन थालिहान्छ । उनीहरु तारा झार्न थालिहाल्छन् । अरु त अरु कार्यकारी कुर्सीमा बसेर सिन्को भाच्न नसक्नेहरु पनि मन्चबाट दमदार भाषण गर्न पछि पर्दैनन् । असम्भव प्रायः विषयलाई पनि […]
पूर्व डा. बबन सिंह भएको पार्टीमा डा. बाबुरामको नम्रताको रहस्य
Posted on: December 20, 2016December 21, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
ध्रुव रिजाल एक पटक कान्तिपुर टेलिभिजनले नेपालमा अबको नयाँ प्रधानमन्त्री को ? भन्ने प्रश्नमा चार सम्भावित नेताको नाम छनौटमा राखेको थियो । ती चार मध्ये एक थिए डा. बाबुराम भट्टराई । दर्शकले भोट गर्दा अधिकांशले भट्टराई रोजे । बाबुरामलाई छनौट गर्ने ८० प्रतिशत भन्दा बढी थिए । नभन्दै त्यसको केही समयपछि भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । […]
समृद्धी क्रान्तिको तेस्रो भागः शैक्षिक विभेद नै विद्रोहको सुरुवात [भिडियाे]
Posted on: December 19, 2016April 6, 2017Posted by: netra
पुस – ४ । सामाजिक तथा राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीको समृद्धी क्रान्तिको तेस्रो भाग लिएर आफ्नो युट्यब ब्लग मार्फत आएका छन् । नेपालको वर्तमान समस्याका साथसाथै राजनीति र कुटनीतिका विषयमा उनले युट्यब ब्लगमार्फत जनचेतना जगाउने प्रयास थालेको हुन् । उनले तेस्रो भागमा २०४७ सालपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमामा देखिएका अनकौँ विकृतीहरुको चिरफार गरेका छन् । […]
जब मैले पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित दम्पतिलाई भेटें
– महेश्वरी खड्का थापा जाडोको मौसम काठमाडौँको चिसो महिना दिन नपुग्दै फेरि अपर्झट आएँ । बाहिर चिसो मौसम म भने भित्रभित्रै पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र बिमला महत पण्डितलाई भेट्न तातिरहेकी थिएँ । इच्छा धेरै पहिलेको भएता पनि समय जुरिरहेको थिएन । केहिदिन अघि सामाजिक कामको शिलशिलामा हामी पाँच जनाको टोली काठमाडौँ आएका थियौं । […]
ओली यसरी आत्तिएपछि ….
Posted on: December 12, 2016December 13, 2016Posted by: नेपाल आज
एरिष्टोटलले २३ सय बर्ष पहिले नाटक र नायकको बारेमा परिभाषा दिएका थिए । उनले बियोगान्त नाटकमा विशेष जोड दिएका छन् । र, नायकको परिस्थितिका बारेमा व्याख्या गरेका छन् । नायकले राम्रोका लागि केही गर्न खोज्दा खोज्दै गल्ती गर्छ र त्यो गल्तीले उसको अनिवार्यरुपमा पतन निम्त्याउँछ । २ बर्षयता नेपाली राजनीतिको नायकका रुपमा हेरिएका एमालेका अध्यक्ष […]
लिङ्गका आधारमा गरिने जुनसुकै अपराध लैङ्गिक हिंसा हुन्
महेश्वरी खड्का थापा ‘घर शान्ति नै विश्वशान्तिको आधार दिगो विकास र लैंगीक हिंसा मुक्त समाज’ भन्ने मुल नाराकासाथ अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा २०१६ विश्वव्यापी रुपमा मनाइएको छ । प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० (१६ दिन) मनाइने यो कार्यक्रम नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टी, संघ–संस्था, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, सबैखाले गैरसरकारी सस्थाहरुद्वारा आ–आफ्नो तवरले कार्यक्रमहरु […]
समृद्धी क्रान्तिको दोस्रो भाग: सुजाता कोईराला र ५० लाख प्रकरण
Posted on: December 9, 2016January 6, 2017Posted by: netra
मंसिर – २४ । अरुण कुमार सुवेदीको समृद्धी क्रान्तिको दोस्रो भाग सार्वजानिक भएको छ । दोस्रो भागमा स्वास्थ्यसंग जोडिएका विविध विषयवस्तुको बारेमा व्याख्या विश्लेषण र विकृतीको चिरफार गरेका छन् । समृद्धी क्रान्ति नामक युट्युब ब्लग मार्फत उनले देशको विभिन्न समस्याको कारण परिणाम र अब आउने बाटोका बारेमा विश्लेषण गर्छन । दोस्रो भागमा उनले नेपाली कांग्रेस […]
सूचनाको अधिकारका लागि काम गर्ने आयोगको ताल यस्तो छ, अरुको के होला ?
Posted on: December 7, 2016Posted by: netra
एक सरकारी निकायबाट एक सूचना चाहिएको थियो । त्यो निवेदनको ढाँचा कस्तो हुने रहेछ भनेर राष्ट्रिय सूचना आयोगको साइट खोलेँ । ‘सूचना माग्ने तरिका’ भनेर लेखेको देखेँ । खोलेँ अंग्रेजीमा मात्रै रहेछ । अंग्रेजी नबुझ्नेहरुका लागि सूचना दिने यो तरिका मन पर्यो । त्यसपछि निवदेन/उजूरीको ढाँचामा गएँ । कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरीको ढाँचा डाउन लोड […]
अमेरिका गएँ, ऋण तिरेँ, मैले के बिराएँ ? मन्त्रीको लाइनमा रहेका नेत्रलालको बयान
Posted on: December 5, 2016December 5, 2016Posted by: Tirtha Khanal
‘देश छोडेर जाने अनि देशकै चिन्ता किन नि ? हामीले संसद्मा बोल्न पठायौं, यहा त फेसबुकमा बोल्नुहुन्छ त ? हामीले चुनाव जिताएर पठायौं, बीचैमा छोडेर हामी सल्यानीलाई हराउनुभयो यहाले । देशको माया नभएकालाई देश शब्द उच्चारण गर्ने अधिकार पनि छैन । सांसद भइसकेको मान्छे अमेरिकामा कुल्ली हुन जानुभयो । आफ्नो बेइज्जत त गर्नुभयो गर्नुभयो, देशकै […]
‘महाकालीको बिजुली स्याटेलाइटबाट चीनलाई बेच्ने कुरा माधव नेपालको थियो, ओलीको होइन’
Posted on: December 5, 2016December 6, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
–प्रदीप नेपाल संविधान संशोधनको विषयले अहिले राजनीति तताई रहेको छ । मेरो दृष्टिमा यो बेकारको टाउको दुखाइ हो । यसले न राजनीतिको विकास हुन्छ, न देश र जनताले केही पाउनेवाला छन् । अहिले देशमा जे भइरहेको छ त्यसले देशलाई तानाशाहीतन्त्र तिर लगिरहेको छ । मुलुक चरम अयोग्य व्यक्तिहरुको हातबाट चलिरहेको छ । माधवकुमार नेपालले दया […]
संशोधनमा सबै दुःखी, भारतका राजदूत खुसी, अब भन्नुहोस यो संशोधन कसका लागि रहेछ ?
Posted on: December 2, 2016December 3, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
–ऋषिकेश पोख्रेल १. पहिलो संविधानसभा – जातीय संघीयताको चर्को दबाब र माओवादीको साथको कारण असफल भयो । २. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान – लामो समयको प्रयत्न र (७ वर्षको निरन्तर) प्रयासबाट निर्माण भयो । ३. संविधान संशोधन – समयको परिवर्तन र जनताको आवश्यकता अनुरुप हुन सक्छ । ४. संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने – […]
एमालेलाई आफ्नै यो घोषणा र व्यवहार हेर्दा लाज लाग्नुपर्ने होइन र ?
Posted on: December 1, 2016December 2, 2016Posted by: मिलन गुरागाईं
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता टायर बोकेर सडक धाउँदैछन् । सरकारी गाडीलाई निशाना बनाएर लात्ती र ढुंगा हान्दैछन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीलाई यसै मेसोमा नाङ्गो बनाउने र सिद्धाउने एकमात्र सुत्रमा लागिरहेका छन् । सन्दर्भ होः पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई अलग गरिएको । तर, एमालेजन आफैँले भुल्दैछन् सो खाका एमालेकै हो […]
बुझि नसक्नु छ एमाले जो प्रतिपक्षमा बस्दा यसरी बहकिन्छ
Posted on: November 30, 2016December 1, 2016Posted by: नेपाल आज
नेकपा एमालेको उग्र रुप आजको पुस्ताले सायदै अनुभव गर्न पाएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादी उग्ररुपमा उदाएपछि एमाले रक्षात्मक बन्यो, माओवादीको उग्रतामा एमाले बुद्ध ठहरियो । तर, ०४६ सालपछिको एमालेको रुप सायदै इतिहासले विर्सने छ । पछिल्लो एक दशक यता एमाले एक्लै प्रतिपक्षमा बसेन । यात उ काँग्रेस वा माओवादीसँग मिलेर सरकारमा बस्यो यात काँग्रेससँगै […]
Posted on: November 28, 2016November 28, 2016Posted by: netra
उनी काठमाडौँका रैथाने हुन् । न्युरोड नजिकैको नरदेबीमा जन्मे हुर्केका अर्यालसँग शहरीया बडप्पन शैलीको कुनै झझल्को पाइँदैन । उनीसँग ग्रामिण भेगको फरासिलोपना छ । ३० बर्षसम्म पर्यटन व्यवसायमा निरन्तर लागेका उनी नेपालका सबैजसो भुभागका बारेमा जानकारी राख्दछन् । देश विदेशको अनुभव सम्हालेका उनी देशको पर्यटन प्रर्बद्धन कसरी हुन सक्छ भन्ने बारेमा एकै सासमा अनेक दृष्टान्त […]
आफ्नालाई विदेश पठाएर कुल्ली बनाउने, अंगीकृतलाई राष्ट्रपति बनाउन खोज्ने
Posted on: November 28, 2016November 29, 2016Posted by: धुर्ब रिजाल
नेपालको तराईतिरका उद्योगमा त्यहाँका आदिवासी, मधेसीलाई मुस्किलले नोकरी मिल्छ । भारतीय र भारतीय मूलका लगानीकर्ताको लगानी रहने त्यस्ता उद्योगका मुख्य कामदार भारतीय नै हुन् । नेपालको रोजगारी भारतीय खोसेका छन् । यहि भएर ३० लाख नेपाली युवा अहिले विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । नेपालमा जागिर खाने, कवाडी उठाउने, कपाल काट्न भनेर आउने भारतीयहरुलाई ६३ सालमा […]
यस कारण कर्णका नाममा आँशु चुहाउन म आर्यघाट गइनँ
Posted on: November 28, 2016November 29, 2016Posted by: Tirtha Khanal
देवकी विष्ट- हो, म गइनँ पशुपति आर्यघाटमा आँशु चुहाउन । उनको मरेको लासमा माल्यापर्ण गर्न । कति मलामी गएका थिए भनेर श्रीमती ममतालाई सुनाउनु पनि थिएन । उनको मृत शरीर हेर्दै बिचरा धेरै राम्रा पत्रकार थिए भनेर सुनाउन पनि गइनँ । किनभने बाचुञ्जेल उनको छटपटी नदेख्ने, नसुन्ने मरेपछि केही व्यहोर्नु पर्दैन भन्ने सत्य मैले आत्मसाथ गर्न […]